Ahoana ny fomba hanatsarana ny finamanana akaiky kokoa amin'ireo efa miaraka aminao - Fifandraisana
Ny fananganana finamanana dia mitaky fotoana, ary matetika dia mety ho tolona ho an'ireo olona tsy salama saina na saro-kenatra.
Ny dingana manaraka dia ny fananana finamanana akaiky kokoa. Raha mahatahotra ianao noho ny fieritreretana an'io dia aza manahy.
Ireto misy dingana tsotra azonao raisina mba hampitomboana ireo finamanana ambonimbony…
Indraindray, ny olona farany tadiavinao dia ny tenanao - mahatsiaro saro-kenatra sy sadaikatra ary tsy mahaliana anao tanteraka ianao.
Andramo ary ampahatsiahivo fa tsy izany no izy!
Raha ny resaka fisakaizana sy ny fanakaikezana ireo sakaiza ankehitriny dia ataovy izay tsara indrindra azonao atao mba tsy hialana amin'ny tenanao.
Tsy misy ilana azy ny manandrana mifamatotra amin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra izay mbola tsy henonao akory - mety hampiditra anao amin'ny toe-javatra mahasosotra sasany izany, ary ny namanao sisa manontany tena hoe maninona ianao no nandainga momba an'io .
Tsy maninona ny misokatra momba ny fahatsapanao. Mety ho saro-kenatra koa ny namanao, koa ho takatrao tanteraka ny fahatsapanao ary ho feno fankasitrahana ianao nitondranao azy.
Raha tsy mitovy ny zavatra tsapany, dia azo inoana fa matoky tena tsara izy ireo, koa tsy hampaninona anao ve fa somary mangina sy misintona ianao.
Na izany na tsy izany dia mitaky be dia be ny fanaovana ny marina ary tsy hisy hitana anao izany raha miaiky ianao fa mitebiteby.
Raha misy izany, dia hosokaina izy ireo fa handeha lavitra ny lalanao (sy ny faritra fampiononana) ianao mba ho lasa mpinamana kokoa amin'izy ireo.
Ny fandaniana fotoana miaraka amin'ny toe-javatra misy ny vondrona dia fomba tsara hahazoana namana ary afaka manala ny tsindry.
Raha te hampitombo ny fisakaizanao amina olona iray manokana ianao sy amin'ny fotoana inona, dia angataho mba hiaraka aminao ihany.
Ataovy maivana fa tsy manjavozavo - manonona sarimihetsika tianao ho hita sy manasa azy ireo hiaraka. Hahatonga anao ho liana izany nefa tsy hahatonga azy ireo hahatsiaro ho adidy.
Ny fangatahana olona hanatevin-daharana anao amin'ny drafitra efa misy anao dia mahatonga ny toe-javatra hahatsapa ho tsy dia terena intsony, ary samy hahatsapa ho mahazo aina kokoa ianareo roa rehefa mihaona.
Ny toerana tsy miandany, toerana malalaka ho an'ny daholobe raha toa ka somary mitebiteby ianao. Hanana be dia be ianao hanelingelina anao, ary ny fijerin'ny olona dia fomba tsara iray hampiala ny fifantohana aminao raha saro-kenatra ianao.
Atombohy amin'ity fomba ity ary ho hitanao tsy ho ela fa samy te-hanao drafitra hihaona amin'ny manaraka ianareo roa.
Mizarà bebe kokoa
Raha mahazo aina ianao amin'izany, misokatra bebe kokoa. Ny fomba tsara ifamatorana amin'ny namanao dia ny fizarana tantara na zavatra niainana.
Aza mitady zavatra matanjaka be amin'ny voalohany, satria mety hahatsapa ho tohina amin'ny fampahalalana manokana toa izany ry zareo!
Atombohy amin'ny zavatra madinidinika ary mangataha torohevitra. Izany dia hanampy ny namanao hahatsapa fa matoky azy ireo ianao ary tianao ho tafiditra ao amin'ny fiainanao izy ireo.
Izany dia hanampy azy ireo hahatsapa ho mahazo aina kokoa amin'ny fizarana zavatra aminao. Hamarino fotsiny fa averinao ilay fankasitrahana - mihaino, mihainoa ary manomeza torohevitra.
Alohan'ny hahalalanao azy dia hanana DMC mahazatra ianao (resaka lalina sy misy dikany!) Ary mifamatotra amin'ny traikefa nizara.
Mitadiava tombontsoa ifanomezana
Ny ankamaroan'ny finamanana dia mifototra amin'ny marimaritra iraisana, fa tena mikaroka lalina mba hahitana zavatra mampifandray anao amin'ny namanao. Ampiasao ity ho fomba hanamafisana ny fifamatorana.
Mety ho liana amin'ny tarika iray ihany ianareo roa fa tsy misy manelingelina ny vondrona mpinamana sisa.
Ampiasao ity ho fotoana iray handaniana fotoana bebe kokoa miaraka amin'ity namana ity, na amin'ny firesahana momba azy na amin'ny fikarakarana hetsika mifandraika amin'ity fahalianana ity.
Ny resadresaka momba ny boky, mozika ary sarimihetsika ankafizinao dia mora entina, koa aza manasongadina ny fomba hahitanao izay tian'izy ireo!
Miezaha hijanona ho tsy salama ary, raha liana amin'ny zavatra tian'izy ireo ianao, dia soraty izany. Ny fahatsiarovana ilay tantara tsy takatry ny saina tian'izy ireo dia ho mora ampiasaina rehefa te hividy fanomezana misy fitsingerenan'ny andro nahaterahana ianao.
Araka ny voalaza dia manaova fanamarihana ara-tsaina (na ara-batana) momba ny zavatra tian'ny namanao.
Aza mitanisa ny zava-drehetra fantatrao ny momba ny namanao amin'izy ireo, satria mety hipoitra tampoka ilay izy! Tadiavo kosa ny fomba kely hanehoana fa nihaino ianao.
Raha mahita afisy amin'ny gig ianao dia fantatrao fa tian'izy ireo izany dia andefaso ny sarin'izy ireo. Raha mahita ny sakafony ankafiziny eo amin'ny menio ianao dia atoroy azy ireo na omeo hevitra hiara-hisakafo ao amin'ny trano fisakafoanana izy ireo.
Ny fananana olona mahatadidy zavatra momba anao dia mahatsapa ho mahafinaritra tokoa, ary hanomboka hanao izany izy ireo ianareo vetivety dia ampy.
Tsy misy zavatra tsara kokoa noho ny mahazo hafatra milaza hoe: 'Nampatsiahy anao izany aho' na 'Nihevitra aho fa hahaliana anao izany!'
Asehoy ny namanao fa mikarakara anao amin'ny fitadidianao antsipiriany kely.
Ny torolàlana ho an'ny olona tsy manaja ny fiaraha-monina
Ampianaro Vaovao Vaovao Izy Ireo
Toy izany koa, ny finamanana dia matetika no mihamatanjaka rehefa mampahafantatra ny namanao zavatra vaovao ianao.
Ny fizarana fahaiza-manao na talenta dia fomba tena mahafinaritra iray hamelana olona iray hidina kely amin'ny fiainanao.
Amin'ny famelana azy ireo hahita bebe kokoa noho ny toetranao ambonin'ny tany dia hahatsapa ho mahazo aina sy liana kokoa izy ireo.
Ity koa dia fomba tena tsara iray hanomezana azy ireo fotoana hanehoana zavatra tsy mahazatra na miafina momba ny tenany.
Azonao atao koa ny manandrana zava-baovao miaraka - mankanesa any amin'ny kilasy Zumba na yoga. Ny fananana vondrona olon-tsy fantatra ary mifankahalala fotsiny dia hanamora ny fifampiankinana. Aza mahazo clingy, fa ampahafantaro azy ireo fa faly ianao fa tsy irery irery eo.
Ny fahafantarana zava-baovao miaraka amin'ny namanao dia mety hahafinaritra tokoa, ary mety hivadika zavatra iarahan'ny roa tonta.
Mety tsy safidy mety ho an'ny rehetra io, fa fomba tsara ifamatorana raha azo atao.
Tsy mila mamandrika dia eran'izao tontolo izao ianao, fa ny mandeha any amin'ny toerana vaovao dia afaka manampy anao ho akaiky kokoa.
Manomàna fitsangatsanganana an-toby, na fitsangatsanganana an-dalambe mankany amin'ny tanàna iray izay mbola tsy nalehanareo roa. Ny fizarana an'ity traikefa vaovao ity sy ny fiaraha-miasa handresena olana dia hanampy anao hahatsapa ho akaiky kokoa.
Ataovy ao an-tsaina fa ny fitsangatsanganana dia mahatonga ny olona sasany hahatsapa ho be fanahiana, koa alao antoka fa manam-paharetana ianao sao sanatria misy fihenjanana tsy ampoizina.
Na izany na tsy izany dia hianaranao zavatra betsaka momba ny tsirairay avy ianao - ny dia lavitra ataon'ny fiara dia manome anao fotoana mety indrindra hivoahana, na hifikitra mozika fotsiny ary hifalifaly miaraka amin'ny orinasa iray.
Manaova ezaka ho an'ny hetsika manokana
Ny fotoana nahaterahana dia mety ho fotoana mety hanehoana fa miahy ny namanao ianao.
Miezaha manokana ary miezaha mafy hanao ny androny ho tsara tarehy. Manomàna tsy ampoizina sakafo atoandro na alaivo fotoana hitadiavana ny DVD tiany indrindra amin'ny fivarotana na amin'ny Internet.
Tsy mila mandany vola be ianao fa mila mampiseho fa mikarakara ianao.
Amin'ny fanaovana ezaka fanampiny dia hanao izany ny namanao mahatsapa manokana sy tiana . Hanampy ny finamanana hitombo sy hatanjaka izany.
Manaova fanamarihana momba ny andro sarotra koa. Ny fahatongavana any mba hiara-hankalaza amin'ny namanao dia zava-dehibe, fa izy io koa dia hisy dikany lehibe raha tadidinao ireo tsingerin-taona nampalahelo tamin'ny fiainany.
Fantaro ny fianakavian'izy ireo
Manomboha amin'ny fanasana azy ireo hihaona amin'ny fianakavianao, ny namanao na ny namanao / mpiara-miasa aminao. Amin'ny fampidirana azy ireo ao amin'ny faribolana akaiky anao kokoa, dia hahatsapa ho toy ny olona manan-danja amin'ny fiainanao izy ireo.
Ny fanasana azy ireo hiditra amin'ny ‘fiainanao manokana’ dia mampiseho fa misy dikany betsaka aminao izy ireo. Rehefa mandeha ny fotoana dia azo antoka fa hamerina ilay sitraka izy ireo.
Miezaha hanao izay tsara indrindra vitanao mba hahitana fahatsapana tsara rehefa mihaona amin'ny olon-tiany.
Aza manahy momba ny mahamenatra izay voajanahary tanteraka ary mampiseho fotsiny fa misy dikany betsaka aminao izany. Raha tsy niahiahy momba izany rehetra izany ianao, dia mety hitranga fa tsy dia liana loatra ianao ny hanana namana tsara kokoa.
Manàna fahalalam-pomba, manomeza teny fiderana roa nefa tsy hihoatra ny rano, ary alao antoka fa misaotra azy ireo ianao nanasa anao hihaona amin'ny olon-tiany.
Ampahany amin'ny maha namana tsara dia tsotra Ny hoe namana tsara.
Miezaha mafy mba hijanona ho mavitrika amin'ny fiainan'ny namanao - aza miandry fotsiny ny hangout vondrona manaraka.
Zahao ny namanao raha mbola tsy nahare momba azy ireo ianao, makà fotoana handefasana hafatra ary henoy rehefa mila miresaka izy ireo.
Vondron'olona mpinamana marobe no feno olona mifampiahy, fa tsy voatery hamaly ny telefaona iray amin'izy ireo amin'ny 4 ora maraina.
Tsy mila mijanona mifatotra amin'ny telefaona 24/7 ianao, fa miezaha ary ho vonona hanampy isaky ny afaka.
Avereno ny toe-javatra - tena tianao ny olona iray tonga hahita anao rehefa manana andro ratsy ianao.
Ataovy toy izany koa ny namanao dia ho gaga ianao fa akaiky kokoa azy ireo ny zavatra tsapanao. Tandremo, mihainoa, ary manolora torohevitra.
ny fomba hahatonga azy hanaja anao
mandra-pahoviana no tokony homenao ny habaka malalanao
eva marie nahantona tamin'ny tolona
fantatrao fa manana andro ratsy ianao rehefa
maninona aho no mahatsiaro ho resy toy izany